မြန်မာပြည် က လုပ်စား အန်ဂျီအို အဖွဲ့တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရား – Let Pan Daily
မြန်မာပြည် က လုပ်စား အန်ဂျီအို အဖွဲ့တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရား
မြန်မာပြည်က လုပ်စား အန်ဂျီအို အဖွဲ့တွေရဲ့ နောက်ကွယ် က အမှန်တရား (၂၀၁၇ ခုနှစ်က ရေးသား ထားတာကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်)
အိမ်​ကကားကို နိုင်​ငံခြား NGO အဖွဲ့တစ်​ခုက ငှား​တော့ ၁၄ သိန်းတဲ့ (တလစာ/ အသားတင်​) ကိုယ်​ကလည်း မလိုက်​နိုင်​​လောက်​တာနဲ့ ဒရိုင်​ဘာလိုက်​မလား​ မေးကြည့်​​တော့ တစ်​လလုံး ၄ သိန်း​လောက်​ပေးမှ လိုက်​နိုင်​မယ်​ဆို​တော့ ကိုယ်​ဖာကိုပဲမောင်း​တော့မယ်​ဆိုပြီး လိုက်​လာရင်း ရန်​ကုန်​မှာ ​သောင်​တင်​​နေတာ​ပေါ့ ၁၀ ရက်​​လောက်​​တော့ကြာပြီထင်ပါတယ်​ မြင်​ရ​တွေ့ရတာလည်း အသည်းနာရတယ်​။
ဒီ NGO က ပြင်​သစ် ​အ​ခြေစိုက်​ကို ရန်​ကုန်​ ( ….. ) စင်​တာမှာ လာခွဲတာ ရုံးခန်းငှားခနဲ့ တင်​ မစားသာ​လောက်​ဘူး ဒါ​ပေသိ သူတို့က Online မှာ page ​ထောင်​ပြီး နိုင်​ငံတကာကို အလှူခံတာဆို​တော့ တစ်​နှစ်​တစ်​နှစ်​ ​ဒေါ်လာကို သန်း ရာနဲ့ချီရကြတာဆိုပဲ။
ဟုတ်​​လောက်​ပါတယ်​ ကျ​နော်​ နယ်​​တွေ ကို လိုက်​ပို့ရတဲ့အခါဆို ​ရေ ကြီးတဲ့​နေရာ ဘာညာ​ပေါ့ဗျာ အဲသလို ပို့ရရင်​ ဟိုတယ်​ခ ဖရီးအပြင်​ အသုံးစရိတ်​တစ်​ည ၁၀၀၀၀ ရတယ်​ ကားထဲ ဆီအပြည့်​ ဖြည့်​​ပေးထားတယ်​ ​နေပြည်​​တော်​က (အမရာ)လို ဟိုတယ်​မျိုးကို ကိုယ့်​​ငွေနဲ့ကို တည်းပါ့လားဆို နိူးပါဗျာ တတ်​နိုင်​ပါဘူး တစ်​ည တစ်​သိန်းခွဲ နှစ်​သိန်း​လောက်​မလား နိူးပါ အန်​ကယ်​က​တော့ နိူးနိူး နိူးပါပဲ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ NGO နဲ့ကျမ တည်းဖြစ်​ခဲ့ရတယ်​ နတ်​ပြည်​​ရောက်​​နေလား မှတ်​ရတယ်​ ပထမ​တော့ သာယာမိ​ပေမယ့်​ ​နောက်​​တော့ ​…. အော်​….ကျွတ်​ကျွတ်​လို့ တမိ တယ်​။
သူတို့ဝန်​ထမ်း​တွေရဲ့လစာ​မေးကြည့်​​တော့ သာမာန်​ဝန်​ထမ်း ၅၀၀၀၀၀( ၅သိန်း )တဲ့ အမ​လေး​လေး တန်​လိုက်​တာ​ပေါ့ စူပါဗိုက်​ဆာက ၇၀၀၀၀၀( ၇သိန်း )တဲ့ ​ဟေ လုပ်​သင့်​တာ​ပေါ့ မန်​​နေဂျာက ၁၀၀၀၀၀၀( ၁သန်း )တဲ့ ဗျာ ထိုက်​တန်​လိုက်​တာ စိတ်​ကူးများ​တောင်​ ယဉ်​မိပါတယ်​ တကယ်​ပါ MD ကပြင်​သစ်​ ၃၀၀၀၀၀၀ ( ၃သန်း )တဲ့ ဟူး နည်းနည်း​နော​နော လားဗျာ။
MD အတွက်​ တိုက်​ခန်းပါငှား​ပေးရ​သေးတာတဲ့ တိုက်​ခန်းဆို​တော့ ခင်​ဗျားတို့က ကွန်​ဒို​မီနီယမ်​တွေ လို့ ထင်​ကြမှာ​ပေါ့ အာ့ဆိုရင်​​တော့ အမှားကြီး မှားပြီပဲ ပန်းလှိုင်​အိမ်​ယာက လုံးချင်းတိုက်​ပါဗျာ မိသားစုလိုက်​​နေကြတာ
ဒီ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အင်္ဂလန် တစ်​​ယောက်​က လက်​​ထောက်​ ​နောက်​ ဘယ်​လ်​ဂျီယမ်​ တစ်​​ယောက်​ပါ​သေးတယ်​ ပြင်​သစ်​တို့ အင်္ဂလန်​တို့ ပြန်​တဲ့အခါမျိုး ထိုင်း ဗီယမ်​နန်​ စင်္ကာပူ သွားတာမျိုးတို့ဆိုရင်​ ​လေယာဉ်​လက်​မှတ်​ အသုံးစရိတ်​ ​လေဆိပ်​ ကြိုပို့ အကုန်​လုပ်​​ပေးကြရတာပါ တကယ့်​ကို ​အေး​ဆေးပါပဲ ။
အချက်​အလက်​ရှာ​ဖွေဖို့ သွားရတာမျိုး​တွေလည်း ရှိတာ​ပေါ့ အချက်​အလက် ​ဆိုတာကလည်း မြို့​တွေရွာ​တွေမှာ သူတို့ဝန်​ထမ်း​တွေ ထားထားပြီးသားပါ ဒီ ဝန်​ထမ်း​တွေက​တော့ နယ်​ခံ​တွေများတယ်​ ဆိုင်​ကယ်​တစ်​စီးဆီ ဝယ်​​ပေးထားတယ်​ ဖုန်းတစ်​လုံးဆီ ဒါမှလည်း သတင်းစုံ ပုလင်းစုံ ဖြစ်​မှာကို အဲသလို​ပေါ့ သူတို့ဝန်​ထမ်း​တွေက ဘယ်​မှာ ဘာဖြစ်​လို့ညာဖြစ်​လို့ သတင်းပို့တဲ့အခါ ဗဟိုရုံးခွဲက လူ​တွေက အဲ့ကိုသွား အင်​တာ​တွေဗျူး ဓာတ်​ပုံ​တွေရိုက်​ ပြီးရင်​ ပြန်​​ပေါ့။
နယ်​ကို ​လေ့လာ​ရေး ခရီးထွက်​ရသလိုပဲ ​အေး​အေးလူလူ ရှိပါ့ ကျန်​တဲ့ အချိန်​​တွေဆို ရုံးခန်းမှာ တ​နေကုန်​ထိုင်​ပြီး Online တက်​​နေကြတာ သူတို့​ပြောတာ​တော့ သတင်းကြည့်​တာတဲ့​လေ ကျ​နော်​တို့က​တော့ အိပ်​ပဲ ။
ဒီလို ရှာ​ဖွေလာတဲ့ မှတ်​တမ်းဓာတ်​ပုံ​တွေကို ဘယ်​နိုင်​ငံ ဘယ်​ပြည်​နယ်​ ဘယ်​မြို့ ဘယ်​ရွာ ဆိုပြီး ​နေရပ်​လိပ်​စာနဲ့ ​နောက်​တစ်​ဖွဲ့က Online မှာ တင်​ပြီး လှူဒါန်းနိုင်​ကြပါသည်​လို့ ​ရေးတင်​ပြီး အလှူခံကြတာ တကယ်​ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ အဖြစ်​အပျက်​​တွေဆို​တော့ ဓာတ်​ပုံ​တွေက သက်​ဝင်​​နေတာ​ပေါ့ ဒီ​တော့ နိုင်​ငံတကာက နာဂစ်​လို အဖြစ်​သနှစ်​​တွေဆို​တော့ သနားစိတ်​​တွေကြွပြီး လှူကြတာ​ပေါ့ အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာက်ို သန်းချီရကြတာ အဲဒါကို ခုနက ​နေရာ​တွေဆီ ပြန်​လှူကြတာ​ပေါ့။
ဒါနဲ့ ကိုယ်​ကလည်း စပ်​စုကြည့်​​တော့ ” ခင်​ဗျားတို့ ရခိုင်​မုန်​ တိုင်းတုန်းက ဘာ​တွေ လှူဖြစ်​ကြလဲ ” ဆို​တော့ အိမ်​ အလုံး ( ၂၀ ) ​ဆောက်​​ပေးထားတယ်​တဲ့ ​နောက်​​ကောဆို​တော့ အဲ့​လောက်​ပဲတဲ့ ​ရော ခက်​ပြီ အိမ်​အလုံး (၂၀ ) ဆိုတာက ဘယ်​​လောက်​များများ ကုန်​မှာမို့လဲဗျာ ​ ဒေါ်လာ တစ်​သိန်းဆိုရင်​ပဲ မြန်​မာ​ငွေ သိန်း​ထောင်​ချီ​နေပီမလား
မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ​ကျေးလက်​​ဒေသ​တွေ မှာက အိမ်​တစ်​လုံးကို သိန်း ၁၅၀ ဆိုရင်​ ရပါပြီ ​တော်​​တော်​ ​ကောင်း​နေပါပြီ အလုံး ၂၀ ဆို​တော့ မြန်​မာ​ငွေ သိန်း ၃၀၀၀ နိုင်​ငံတကာက လှူတာက အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ သန်းကို ရာချီလှူကြတာပါ သန်း ၁၀၀ / ၂၀၀ နှစ်​တိုင်း ရ​နေတာပါ သူတို့ ပြည်​တွင်းကို ပြန်​လှူတာက တကယ့်​ သဘာဝ​ဘေး ဖြစ်​မှ ​ဒေါ်လာ ​လေးငါးသိန်း​လောက်​ပါ မြန်​မာ​ငွေနဲ့ဆို သိန်း ​လေးငါး​ထောင်​​ပေါ့။
ဘာမှမဖြစ်​တဲ့ သာမာန်​နှစ်​​တွေ ဆိုရင်​ ဒီလိုပဲ အိ​ရောအိ​ရောနဲ့ ပြီးသွားတတ်​ကြတာ ဒါ​ပေမယ့်​ ဝန်​ထမ်း​တွေရဲ့ လခနဲ့အသုံးစရိတ်​က တနှစ်​ပတ်​လုံး ဝရမ်း​နေတာ ။ ​ပြောချင်​တာက NGO ​တွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အသုံးစရိတ်​​တွေကိုပါ ဒါကို ကျ​နော်​တို့​တော်​​တော်​များများက သတိမထားမိကြပါဘူး ။
ဆင်းရဲမွဲ​တေမှုမြင့်​မားတဲ့ ဘင်္ဂလား​ဒေရှ့်​ လို မြန်​မာလို နိုင်​ငံ​တွေဆီက အ​ကြေကွဲရဆုံးပုံ​တွေကို အမိအရယူပြီး Online ကို အ​ပြေးအလွှား တင်​ကြတာ အလှူ​ငွေ မြန်​မြန်​နဲ့ များများ ဦး​အောင်​ရ​အောင်​​ပေါ့ လုပ်​ကြတာ။
တစ်​ခါတစ်​ခါ NGO ချင်း ထ သတ်​ကြ​သေးတာ နင်​တို့ ​ဖောင်​​ဒေးရှင်းက ဘာညာ ဆိုပြီး ဖြစ်​ ကြ​သေးတာဗျ အပြင်​လည်း သတ်​တာပဲ လိုင်း​ပေါ်လည်း တက်​သတ်​တာပဲ ဒါ​တွေ ထားပါ​တော့​ဗျာ ။ ကျန်​တာ မကြည့်​နဲ့ဗျာ ကျ​နော်​တို့ကို တစ်​လ​လောက်​ငှားတာ​တောင်​ တပတ်​ကို ဖုန်း​ဘေလ်​ ၅၀၀၀ ရတယ်​ နယ်​ခရီး မရှိရင်​ အဲကွန်းခန်း ထဲ အိပ်​ ၁၂ နာရီ​လောက်​ကျ မနက်​စာ ထွက်​စား ည​နေ ၅ နာရီဆို ​သော့ပိတ်​ပြန်​ ​အေး​ဆေးမှ တကယ့်​ကို ​အေး​ဆေးပဲ ဖက်​စလတီက လုံးဝ လုံးဝ အပြည့်​ကို ပို​နေ​ပါသေးတယ်​။
ဘယ်​နားသွားပြီး အန်​ဂျီအို လည်း မသိ​ပေမယ့်​ သူတို့ဟာ သူတို့​တော့ အိုဂျီအန်​ ပီသား ပဲဗျာ ကျ​နော်​တို့နိုင်​ငံက ဆင်းရဲမွဲ​တွေမှု​တွေ ကျ​နော်​တို့နိုင်​ငံက သဘာဝ​ဘေး​တွေရဲ့ မှတ်​တမ်းတင်​ဓာတ်​ပုံ​တွေကို ကမ္ဘာမှာချပြပြီး အညွှန့်​အဖူး​လေး​တွေ ခူးခပ်​ စား​နေကြတာကို ကျ​နော်​တို့ လူမျိုး​တွေ သိ​စေချင်​ရုံသက်​သက်​ပါ ။
(​စေတနာသန့်​သန့်​ NGO များကို မထိခိုက်​​စေလိုပါ)
မွနျမာပွညျက လုပျစား အနျဂြီအို အဖှဲ့တှရေဲ့ နောကျကှယျ က အမှနျတရား (၂၀၁၇ ခုနှဈက ရေးသား ထားတာကို ပွနျလညျဖျောပွလိုကျပါတယျ)
အိမျကကားကို နိုငျငံခွား NGO အဖှဲ့တဈခုက ငှားတော့ ၁၄ သိနျးတဲ့ (တလစာ/ အသားတငျ) ကိုယျကလညျး မလိုကျနိုငျလောကျတာနဲ့ ဒရိုငျဘာလိုကျမလား မေးကွညျ့တော့ တဈလလုံး ၄ သိနျးလောကျပေးမှ လိုကျနိုငျမယျဆိုတော့ ကိုယျဖာကိုပဲမောငျးတော့မယျဆိုပွီး လိုကျလာရငျး ရနျကုနျမှာ သောငျတငျနတောပေါ့ ၁၀ ရကျလောကျတော့ကွာပွီထငျပါတယျ မွငျရတှရေ့တာလညျး အသညျးနာရတယျ။
ဒီ NGO က ပွငျသဈ အခွစေိုကျကို ရနျကုနျ ( ….. ) စငျတာမှာ လာခှဲတာ ရုံးခနျးငှားခနဲ့ တငျ မစားသာလောကျဘူး ဒါပသေိ သူတို့က Online မှာ page ထောငျပွီး နိုငျငံတကာကို အလှူခံတာဆိုတော့ တဈနှဈတဈနှဈ ဒျေါလာကို သနျး ရာနဲ့ခြီရကွတာဆိုပဲ။
ဟုတျလောကျပါတယျ ကနြျော နယျတှေ ကို လိုကျပို့ရတဲ့အခါဆို ရေ ကွီးတဲ့နရော ဘာညာပေါ့ဗြာ အဲသလို ပို့ရရငျ ဟိုတယျခ ဖရီးအပွငျ အသုံးစရိတျတဈည ၁၀၀၀၀ ရတယျ ကားထဲ ဆီအပွညျ့ ဖွညျ့ပေးထားတယျ နပွေညျတျောက (အမရာ)လို ဟိုတယျမြိုးကို ကိုယျ့ငှနေဲ့ကို တညျးပါ့လားဆို နိူးပါဗြာ တတျနိုငျပါဘူး တဈည တဈသိနျးခှဲ နှဈသိနျးလောကျမလား နိူးပါ အနျကယျကတော့ နိူးနိူး နိူးပါပဲ ဒါပမေယျ့ ဒီ NGO နဲ့ကမြ တညျးဖွဈခဲ့ရတယျ နတျပွညျရောကျနလေား မှတျရတယျ ပထမတော့ သာယာမိပမေယျ့ နောကျတော့ …. အျော….ကြှတျကြှတျလို့ တမိ တယျ။
သူတို့ဝနျထမျးတှရေဲ့လစာမေးကွညျ့တော့ သာမာနျဝနျထမျး ၅၀၀၀၀၀( ၅သိနျး )တဲ့ အမလေးလေး တနျလိုကျတာပေါ့ စူပါဗိုကျဆာက ၇၀၀၀၀၀( ၇သိနျး )တဲ့ ဟေ လုပျသငျ့တာပေါ့ မနျနဂြောက ၁၀၀၀၀၀၀( ၁သနျး )တဲ့ ဗြာ ထိုကျတနျလိုကျတာ စိတျကူးမြားတောငျ ယဉျမိပါတယျ တကယျပါ MD ကပွငျသဈ ၃၀၀၀၀၀၀ ( ၃သနျး )တဲ့ ဟူး နညျးနညျးနောနော လားဗြာ။
MD အတှကျ တိုကျခနျးပါငှားပေးရသေးတာတဲ့ တိုကျခနျးဆိုတော့ ခငျဗြားတို့က ကှနျဒိုမီနီယမျတှေ လို့ ထငျကွမှာပေါ့ အာ့ဆိုရငျတော့ အမှားကွီး မှားပွီပဲ ပနျးလှိုငျအိမျယာက လုံးခငျြးတိုကျပါဗြာ မိသားစုလိုကျနကွေတာ
ဒီ အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ အင်ျဂလနျ တဈယောကျက လကျထောကျ နောကျ ဘယျလျဂြီယမျ တဈယောကျပါသေးတယျ ပွငျသဈတို့ အင်ျဂလနျတို့ ပွနျတဲ့အခါမြိုး ထိုငျး ဗီယမျနနျ စင်ျကာပူ သှားတာမြိုးတို့ဆိုရငျ လယောဉျလကျမှတျ အသုံးစရိတျ လဆေိပျ ကွိုပို့ အကုနျလုပျပေးကွရတာပါ တကယျ့ကို အေးဆေးပါပဲ ။
အခကျြအလကျရှာဖှဖေို့ သှားရတာမြိုးတှလေညျး ရှိတာပေါ့ အခကျြအလကျ ဆိုတာကလညျး မွို့တှရှောတှမှော သူတို့ဝနျထမျးတှေ ထားထားပွီးသားပါ ဒီ ဝနျထမျးတှကေတော့ နယျခံတှမြေားတယျ ဆိုငျကယျတဈစီးဆီ ဝယျပေးထားတယျ ဖုနျးတဈလုံးဆီ ဒါမှလညျး သတငျးစုံ ပုလငျးစုံ ဖွဈမှာကို အဲသလိုပေါ့ သူတို့ဝနျထမျးတှကေ ဘယျမှာ ဘာဖွဈလို့ညာဖွဈလို့ သတငျးပို့တဲ့အခါ ဗဟိုရုံးခှဲက လူတှကေ အဲ့ကိုသှား အငျတာတှဗြေူး ဓာတျပုံတှရေိုကျ ပွီးရငျ ပွနျပေါ့။
နယျကို လလေ့ာရေး ခရီးထှကျရသလိုပဲ အေးအေးလူလူ ရှိပါ့ ကနျြတဲ့ အခြိနျတှဆေို ရုံးခနျးမှာ တနကေုနျထိုငျပွီး Online တကျနကွေတာ သူတို့ပွောတာတော့ သတငျးကွညျ့တာတဲ့လေ ကနြျောတို့ကတော့ အိပျပဲ ။
ဒီလို ရှာဖှလောတဲ့ မှတျတမျးဓာတျပုံတှကေို ဘယျနိုငျငံ ဘယျပွညျနယျ ဘယျမွို့ ဘယျရှာ ဆိုပွီး နရေပျလိပျစာနဲ့ နောကျတဈဖှဲ့က Online မှာ တငျပွီး လှူဒါနျးနိုငျကွပါသညျလို့ ရေးတငျပွီး အလှူခံကွတာ တကယျဖွဈခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြတှဆေိုတော့ ဓာတျပုံတှကေ သကျဝငျနတောပေါ့ ဒီတော့ နိုငျငံတကာက နာဂဈလို အဖွဈသနှဈတှဆေိုတော့ သနားစိတျတှကွှေပွီး လှူကွတာပေါ့ အမရေိကနျဒျေါလာကို သနျးခြီရကွတာ အဲဒါကို ခုနက နရောတှဆေီ ပွနျလှူကွတာပေါ့။
ဒါနဲ့ ကိုယျကလညျး စပျစုကွညျ့တော့ ” ခငျဗြားတို့ ရခိုငျမုနျ တိုငျးတုနျးက ဘာတှေ လှူဖွဈကွလဲ ” ဆိုတော့ အိမျ အလုံး ( ၂၀ ) ဆောကျပေးထားတယျတဲ့ နောကျကောဆိုတော့ အဲ့လောကျပဲတဲ့ ရော ခကျပွီ အိမျအလုံး (၂၀ ) ဆိုတာက ဘယျလောကျမြားမြား ကုနျမှာမို့လဲဗြာ ဒျေါလာ တဈသိနျးဆိုရငျပဲ မွနျမာငှေ သိနျးထောငျခြီနပေီမလား
မွနျမာပွညျရဲ့ ကြေးလကျဒသေတှေ မှာက အိမျတဈလုံးကို သိနျး ၁၅၀ ဆိုရငျ ရပါပွီ တျောတျော ကောငျးနပေါပွီ အလုံး ၂၀ ဆိုတော့ မွနျမာငှေ သိနျး ၃၀၀၀ နိုငျငံတကာက လှူတာက အမရေိကနျဒျေါလာ သနျးကို ရာခြီလှူကွတာပါ သနျး ၁၀၀ / ၂၀၀ နှဈတိုငျး ရနတောပါ သူတို့ ပွညျတှငျးကို ပွနျလှူတာက တကယျ့ သဘာဝဘေး ဖွဈမှ ဒျေါလာ လေးငါးသိနျးလောကျပါ မွနျမာငှနေဲ့ဆို သိနျး လေးငါးထောငျပေါ့။
ဘာမှမဖွဈတဲ့ သာမာနျနှဈတှေ ဆိုရငျ ဒီလိုပဲ အိရောအိရောနဲ့ ပွီးသှားတတျကွတာ ဒါပမေယျ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ လခနဲ့အသုံးစရိတျက တနှဈပတျလုံး ဝရမျးနတော ။ ပွောခငျြတာက NGO တှရေဲ့ ကွီးမားတဲ့ အသုံးစရိတျတှကေိုပါ ဒါကို ကနြျောတို့တျောတျောမြားမြားက သတိမထားမိကွပါဘူး ။
ဆငျးရဲမှဲတမှေုမွငျ့မားတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှျေ့ လို မွနျမာလို နိုငျငံတှဆေီက အကွကှေဲရဆုံးပုံတှကေို အမိအရယူပွီး Online ကို အပွေးအလှား တငျကွတာ အလှူငှေ မွနျမွနျနဲ့ မြားမြား ဦးအောငျရအောငျပေါ့ လုပျကွတာ။
တဈခါတဈခါ NGO ခငျြး ထ သတျကွသေးတာ နငျတို့ ဖောငျဒေးရှငျးက ဘာညာ ဆိုပွီး ဖွဈ ကွသေးတာဗြ အပွငျလညျး သတျတာပဲ လိုငျးပျေါလညျး တကျသတျတာပဲ ဒါတှေ ထားပါတော့ဗြာ ။ ကနျြတာ မကွညျ့နဲ့ဗြာ ကနြျောတို့ကို တဈလလောကျငှားတာတောငျ တပတျကို ဖုနျးဘလျေ ၅၀၀၀ ရတယျ နယျခရီး မရှိရငျ အဲကှနျးခနျး ထဲ အိပျ ၁၂ နာရီလောကျကြ မနကျစာ ထှကျစား ညနေ ၅ နာရီဆို သော့ပိတျပွနျ အေးဆေးမှ တကယျ့ကို အေးဆေးပဲ ဖကျစလတီက လုံးဝ လုံးဝ အပွညျ့ကို ပိုနပေါသေးတယျ။
ဘယျနားသှားပွီး အနျဂြီအို လညျး မသိပမေယျ့ သူတို့ဟာ သူတို့တော့ အိုဂြီအနျ ပီသား ပဲဗြာ ကနြျောတို့နိုငျငံက ဆငျးရဲမှဲတှမှေုတှေ ကနြျောတို့နိုငျငံက သဘာဝဘေးတှရေဲ့ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံတှကေို ကမ်ဘာမှာခပြွပွီး အညှနျ့အဖူးလေးတှေ ခူးခပျ စားနကွေတာကို ကနြျောတို့ လူမြိုးတှေ သိစခေငျြရုံသကျသကျပါ ။
(စတေနာသနျ့သနျ့ NGO မြားကို မထိခိုကျစလေိုပါ)
လမျးပျေါမှာ ငုံးဥပွုတျရောငျးနေ တဲ့ ကလေးငယျလေး ရဲ့ စိတျဓာတျက လေးစားစရာကောငျး လို့ သူ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံကို မြှဝလောတဲ့ ပွညျသူတဈဦး